Featured | U.N.O.B | Page 4
အမေရိကားမှာ စီးပွားရေးတွေကျလို့ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး ၀င်ငွေနည်းလာတော့ ငွေကိုဘယ်လိုချွေတာကြရမလဲ စဉ်းစားလာကြရတယ်။ ကုန်ပေါက်တွေမှန်သမျှ အကုန်ပိတ်၊ အရေးမကြီးရင် ဘာမှမ၀ယ်ပဲ တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့အရာ ဆိုရင်တောင် ဘယ်မှာသက်သာမလဲ သေချာစုံစမ်းပြီးမှ ၀ယ်တော့တယ်။ ဖလော်ရီဒါလိုနေရာမျိုးမှာ ကား မရှိရင် မဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး Car Insurance ပါ မဖြစ်မနေတွဲဝယ်ကြရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကြာလာတော့ အချိန်တန် Renew လုပ်ဖို့ Statement ရောက်လာရင် Check ရေးပြီးပြန်ပို့လိုက်နဲ့ အစဉ်ပြေနေကြတာပေါ့။ Violation Ticket မရရင် အလိုလို ဈေးကျသွားလိမ့်မယ်လို့ပဲ ပုံမှန်တွေးပြီး ဘယ်မှလဲ ထပ်စုံစမ်းမနေတော့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)လ လောက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက သတင်းရပြီး Sate Farm ကနေ Progressive ကိုပြောင်းလိုက်တာ (၆)လကို $300 နီးပါး သက်သာသွားတယ်။ ကျွန်တော် State Farm မှာ Full Cover (၆)လကို $600 နီးပါးပေးနေရာကနေ Progressive မှာ $300 ကျော်ပဲပေးရတော့တယ်။ (၆)လမှာ $300 ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲ ပြန်ထွက်လာတော့ ကိုယ်သုံးချင်တာ တစ်ခုခု စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် သုံးလို့ရတာပေါ့။ တစ်ချို့တွေဆို တစ်လ တစ်လ Read More...
These are the pictures from 1st Anniversary of UNOB in Vero Beach. [nggallery id=20] Read More...